Isra’iil oo ka laabatay qorshe ay dib ugu celineysay muhaajiriin Afrikaan ah… – Hagaag.com
Isra’iil oo ka laabatay qorshe ay dib ugu celineysay muhaajiriin Afrikaan ah…
Posted on 25 Abriil 2018 by Admin in World // 0 Comments
Isra’iil ayaa waxa ay sheegtay inay ka laabaneyso qorshe ay dib ugu celineysay muhaajiriin Afrikaan ah oo sifo sharcidarro ah ku galay dalkaasi.
Qoraal ay Isra’iil u dirtay maxkamadda sare, ayaa waxa ay ku sheegtay inay ka baaraan dageyso qorshooyin ay dib u dejin ikhtiyaari ah ugu sameyneyso qaxootiga Afrikaanka ah balse waxa ay sheegtay in qorshihii sida qasabka ah dib loogu celinayay qaxootigan haatan meesha laga saaray.
Xaalada 30 kun oo qaxooti Afrikaan ah oo kasoo kala jeeda dalalka Eritrea iyo Sudan ayaa noqotay mid si weyn loogu dagaalamay oo la isugu qabsaday.
Ra’iisal wasaaraha Isra’iil Benjamin Netanyahu, ayaa waxa uu ku tilmaamay dhammaan qaxootiga Afrika kasoo jeedo inay yihiin jawaasiis, waxa uuna dhawaan isaga baxay heshiis qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Canada ay dib u dejin ugu sameynayeen 16 kun oo muhaajiriin Afrikaan.
Maxkamadda ugu sareysa Isra’iil ayaa joojisay musaafurinta dadkani oo dhici lahayd Axaddii aanu soo dhaafnay.
Qorshaha lagu doonayay in dadkani muhaajiriinta ah dib loogu celiyo Afrika gaar ahaan Uganda iyo Ruwanda ayaa waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha Isra’iil waxaana ka dhashay dibadbaxyo.
Qorshahan imika cusub waxaa lagu wadaa in lagu dhaqan galiyo muddo ka badan 5 sano.
Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa waxay Isra’iil ka soo galeen dhanka Masar dhowr sano ka hor inta aan darbiga laga dhisin xuduuda lama degaanka ah. Arrintani ayaa imika soo afjartay safar dheer oo dhanka sharciga ah.